Warshadda Is dhexgalka Shiinaha iyo soosaarayaasha Shiinaha | Boselan
Midab daaha: Midabka waa la beddeli karaa
Dhumucda lakabka: 0.25 ~ 0.40mm
Heerka PH: Heerka PH: 3 ~ 11; Khaas ah PH: 1 ~ 14
Adag: 6.0 Mohs
Tijaabada xuubka: > 1500V
Is dhexgalka CSTR, waa codsi caadi ah oo nooc ka mid ah taangiyada noolaha, gaaska kor ku xusan, tan hoose waa tan gaaska GFS. Waxay leedahay faa'iidooyinka badbaadinta aagga ay haysato iyo adeegsiga habboon ee bannaan, taas oo ah habka ugu caansan ee dalabka xilligan la joogo.
Intooda badan waxaa loo isticmaalaa beero yaryar (qiyaastii 10000-20000 xoolo) iyo wax soo saar madaxbanaan oo ay maamusho shirkado wax soosaara. Shirkaddayadu waxay cayimi kartaa dhexroorka, dhererka iyo midabka jirka haanta iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha. Qalliin sahlan, hawlgal ku habboon, uma baahna kharashyo badan oo shaqaale, dayactirka iyo hawlgalku waa kuwo aad u fudud. Waa doorashada koowaad ee inta badan beeraleyda iyo xitaa shirkadaha. Haddii aad rabto inaad ogaato cabirka xajmiga gaarka ah iyo macluumaadka faahfaahsan, fadlan nala soo xiriir.
Qaaciddada Caadiga ah ee loo yaqaan 'Porcelain Enamel Formula'
Boselan waxay soo saartay qaaciddo dhaldhalaalka u gaar ah taas oo ka dhigaysa boodhadhkeena mid aad u dhalaalaya, dhejis ah oo si habsami leh u socota. Ka fogaanshaha qanjidhada iyo kalluunka la dubay.
Tiknoolajiyadda Edge Enameled
Cidhifyada taangiyada Boselan waxay isku xireen isla shey isku mid ah si looga fogaado koronto ku timaada macdanta birta, miridhku iyo daciifinta isku xidhka.
Jaangooynta Soo-saarista Jaan-gooyeha Jirka Dheeman
Mugga (m 3 )
Tirada Guud ee Taargada
Shaxda Nidaamka Biyo-qabatinka ee Fudud
Hore: Taangiyada GFS oo madaxbanaan
Xiga: Kalasaarka CSTR
Taangiyada Noolaha Biyo-qabka
Naqshadeynta Taranka Noolaha Noolaha
Taangiyada Kaydinta Noolaha